Si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay: Lenovo Z6 Pro wuxuu noqon doonaa 5G mobile | Androidsis
Lenovo ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in shirkadda xigta ee shirkadda Shiinaha ee casriga ah, Lenovo Z6 Pro, ayaa si rasmi ah uga bilaabmi doonta Shiinaha 23ka Abriil. Kahor intaan la sii dayn, faahfaahin badan ayaa la kashifay-oo laga sii daayay khadka tooska ah ee ku saabsan
Hadda, horumar cusub, shirkadda fulintu waxay ku dhejisay shaashadda shaashadda taleefanka aaladda Weibo, oo xaqiijineysa wixii horay loo sii daayay: qalabka waxqabadka sare wuxuu la jaan qaadayaa isku xirnaanta 5G.
Horaa loo xaqiijiyay in Lenovo Z6 Pro uu ku shaqeyn doono processor-ka Qualcomm Snapdragon 855. Tani ma noqon doonto mobiladii ugu horreeyay ee shirkaddu xirxirto Chipset-ka la sheegay. The Lenovo Z5 ProGT wuxuu kaloo ku shaqeeyaa isla chipset-ka.
Lenovo Z6 Pro oo leh taageero ku xirnaanta 5G
Shirkadaha horay loo wadaagay, shirkaddu waxay ka dhawaajisay arrintaas Kaamerada taleefankaagu waxay awood u yeelan doontaa inay qabato 100 tallaabo oo megapixel ah. Waxaa jirta suurtagalnimada in shirkadda weyn ee Shiinuhu ay ku tiirsan tahay nooc ka mid ah barnaamijyada ama "khiyaanada" inay ku toogtaan 100 sawir oo sawirro ah, maadaama ay u eg tahay inaysan hirgelin doonin dareemayaal leh awoodda megapixel sida Tani waxay noqon kartaa muuqaalka Cadaadiska oo ay shirkaddu ku faanaysay astaanta tan iyo bishii Febraayo.
Iyadoo la adeegsanayo teaser kale, Lenovo ayaa sidoo kale taas ku xaqiijisay Z6 Pro wuxuu taageeraa Hyper Video, U oggolaanshaha sicirka wareejinta ka sarreeya fiidiyowyada jira. Illaa iyo hadda, faahfaahinta kamaradda HyperVision iyo muuqaalada Hyper Video weli lama shaacin. Waa su’aalo aan wax ka baran doonno oo aan ka warbixin doonno gadaal, maalmaha soo socda.
Si loo ogaado dhab ahaan waxa taleefannada casriga ahi bixiyaan, iyo sidoo kale qiimaha iyo faahfaahinta la heli karo, waa inaan sugnaa illaa ay shirkaddu si rasmi ah u daahfureyso Lenovo Z6 Pro munaasabad ka dhici doonta Abril 23 Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay: Lenovo Z6 Pro wuxuu noqon doonaa mobilada 5G